Netflix: Inona avy ireo sarimihetsika & andiany vaovao jerena amin'ny Aogositra 2020? - FIVAVAHANA TELY
Netflix: Inona avy ireo sarimihetsika & andiany vaovao jerena amin'ny Aogositra 2020?
By Chinde On Aogositra 3, 2020
Efa ho amin'ny volana aogositra izy io ary tsy misy dikany izany: programa Netflix vaovao no miandry antsika ary tena mahafinaritra!
Ny total kiff! Raha mbola miadana tokoa ny fahavaratra ary efa nanomboka ny fialantsasatra ho an'ny sasany amintsika, tsy manadino ireo izay tsy hijanona alohan'ny tapaky ny volana aogositra i Netflix miaraka amin'ny programa izay mety hahatonga antsika maniry aza avela hiala ny tranonay intsony. Toy ny mahazatra dia hisy ny tantara an-tsehatra, hetsika, hatsikana ary nofinofy. Ary raha nahita ny tohin'ny The Kissing Booth tamin'ny volana Jolay izahay dia toa mampientanentana ihany ity volana ity raha mahatoky ny haino aman-jery atolotry ny video amin'ny serivisy fitakiana isika. Vonona ve ianao ny hahita izay miandry anao? Ampifamadiho ny fehikibo seza, andao atao!
Ireo sarimihetsika vaovao
Ity volana ity, Netflix mametraka ny sarimihetsika vaovao eo ambanin'ny famantarana manga / fotsy / mena miaraka amin'ny sarimihetsika frantsay kultus. Entre Ny faratalan'i Amelie Poulain ary koa ny fihaonana tsy ampoizina nataon'i Catherine Deneuve sy Nekfeu Manasaraka antsika ny zava-drehetra, Mety holazaiko aminao koa fa tena faly izahay. Fa mpankafy ny frankisma Fast and Furious ho afa-po ihany koa satria tonga eo amin'ny lampihazo ny ampahany fahavalo toy ny sarimihetsika interaktifika nalaina tamin'ny andiany Kimmy Schmidt azo alaina. Raha tsorina dia faly isika!
1 aogositra: dimy, ny fahatongavan'ny Amélie Poulain & Fasana
5 Aogositra: Kimmy Schmidt tsy azo ihodivirana: Kimmy vs. Reverend
11 Aogositra: Manasaraka antsika ny zava-drehetra
14 Aogositra: Herin'ny tetikasa
16 aogositra: Haingana sy mahatezitra 8
Ity no momba an'i Netflix izay mahasosotra ny maro hatrany…
Ny andiany vaovao
Amin'ny lafiny andiany, mpankafy ny Losifera ho valiny farany amin'ny faharetan'izy ireo satria ho avy ny vanim-potoana 5! Ambonin'izany, azonao atao ihany koa ny manao fitsapana mba hahitana hoe inona ireo andiany mety nilalao. Fa tsy izany ihany fa hatramin'ny farany dia hanana fotoana hiara-misakafo amin'ny vanim-potoana faha-2 amin'ny Dirty John, ny ampahany faharoa sy farany amin'ny vanim-potoana faha 8 fitoriana atao sy vanim-potoana 3 avy amin'i Alta Mar. Raha tsorina dia tena mavesatra miaraka hiaraka aminay mandritra ny fahavaratra amin'ny seza.
6 Aogositra: Ny Orana (vanim-potoana farany)
7 Aogositra: Alta Mar (vanim-potoana 3)
10 Aogositra: Suits (vanim-potoana 8, fizarana 2)
12 Aogositra: Greenleaf (vanim-potoana 5)
14 aogositra: 3% (vanim-potoana farany) Dirty John (vanim-potoana 2) & ny tanora mpankafy Bounty Hunter
21 Aogositra: Lucifer (vanim-potoana 5, fizarana 1)
25 Aogositra: Trinkets (vanim-potoana farany.
loharano: https: //trendy.letudiant.fr/netflix-quels-sont-les-nouveaux-films-et-series-a-mater-en-aout-2020-a4958.html
XNXX: Inona ny teknika tianao horesahina?
Ny mpihira Blanche Bailly dia niteraka ny zanany voalohany, hoy ilay anarana